I-Ultrasonic Hemp Fiber Processing - Hielscher Ultrasound Technology
I-ultrasonic retting yezinto ezibonakalayo ezinamafutha afana ne-hemp ne-flax fibers ivumela ukuguqulwa kwe-fiber okusheshayo nokuphumelelayo.
Ama-bast fibers asetshenziswe nge-Ultrasonically afakwa futhi abonisa indawo ephezulu kakhulu, ayenamandla okuqina nokuguquguquka.
Ukucubungula kwe-fiber ultrasonic kuyisimo sokusebenza esisheshayo futhi esisebenziseka kalula sokukhiqiza izimboni.
I-Ultrasonic retting iyindlela esheshayo, ephumelelayo neyoluhlaza kumasiko wendabuko noma amazolo. I-cavitation yama-Acoustic, eyenziwa ukuphakama okukhulu, i-low-frequency ultrasound, iphula izinhlaka zamaselula ezinsimbi ezifana nezinkuni, imifino yemifino ehlanganisa i-fiber ebanzi njengeflaksi, i-hemp, i-nettle, utshani wekolweni, utshani welayisi, i-jute, kanye nezintambo ezithathwe ngamagatsha (isb., sisal, manilla hemp, abacá) kanye ne-fibre etholakale izithelo ezifana nekhanda emagobolondo ekhukhunathi.
I-Ultrasonic disentangling iguqula ama-microfibers (cishe u-3-5μm) ibe yi-nanofibers (≥100nm). Ngaphezu kwalokho, ukucutshungulwa kwe-ultrasonic kwenzelwa ukuchithwa kwe-xyloglucan ehlanzekile ne-xylan ekuxazululeni, kubonisa ukuthi ikhono le-ultrasound lokunciphisa i-hemicellulose.
Nakuba i-retting i-ultrasonic isetshenziswa kakhulu kwisisombululo se-aqueous, kungenzeka – kuye ngokuthi izinto eziluhlaza kanye nomphumela ohlosiwe – ukuhlanganisa inqubo ye-ultrasonic nge ukwelashwa kwama-alkali. Izixazululo zeNaOH, H2O2 futhi H2SO4 ingasetshenziselwa ukukhipha ama-alkalization ukuthola ama-nuclefibers ama-cellulose esikhathini esifushane sokucubungula. Nge ukwelashwa kwe-ultrasonic, i-fibrillation ye-cellulose microfibers ingafinyelelwa kalula. Izindwangu ezikhiqizwa nge-ultrasonically zibonisa i-morphology ethize lapho ama-nanofibers (≥ 100nm) asakazwa kuyo yonke indawo ye-microfibers (3-5μm).
Ukuskena ukuhlaziywa kwe-microscopy electronic ngefolk, i-hemp ne-coir fibers noma ngaphandle kokucubungula kwe-ultrasonic.
umthombo: Renouard et al. 2014
I-UIP4000hdT (4kW) iprosesa ye-industrial ultrasonic ye-fiber processing
Ngemakethe ekhulayo ye imbewu ye-hemp kanye ne-phyto-cannabinoids iza ukukhiqizwa okwandayo kwe-hemp straw. Njengomkhiqizo, i-hemp straw kanye namafayili ayo asetshenziselwa ukukhiqizwa kwephepha noma i-geo-textiles, ukuqiniswa kwezinto zokwakha kanye nokwakha.
Insimu eyomile futhi eyinqunyiwe ingasetshenziswa njengento eluhlaza yokwelashwa kwe-ultrasonic, kodwa ngenqubo ephakeme ye-ultrasonic ekhishwa ukusetshenziswa kwe-shives (okuyingxenye) e-decorativeed shives Kunconywa. Isibhakabhaka sihlanjululwa emanzini (isisombululo esino-aqueous) ukuze kutholakale i-slurry eguquguqukayo, engadlula ukugeleza kwe-ultrasonic-ngokusebenzisa iseli. Inqubo ye-sonication ithatha isikhathi esifushane (cishe u-30-60 sec.). Ucwaningo lwesayensi luye lwabonisa ukuthi i-ultrasonication ithuthukisa isisetshenziswa se-hemicellulose ne-lignin kusuka ezintweni eziphathelene ne-lignocellulosic. Ukwengeza, i-sonication ilulaza i-cellulose ne-pectin. Ukucubungula nge-ultrasonic ye-hemp ne-flax kubuye kuthuthukise ukuguquguquka nokuqina kwamandla amafibisi, okuyizinto eziyigugu ekukhiqizeni kwezingubo kanye nokuhlanganiswa.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Fiber Processing
ukunciphisa kokuqukethwe kwe-lignin
ukwandisa i-fibre flexible
amandla aphakeme kakhulu
Ukwelashwa kwe-ultrasonic-alkali ye-hemp fiber (Ferreira et al. 2019)
I-Ultrasonically Modified Hemp Fiber
I-Ultrasonically fibrillated bast fiber (isb., I-hemp, ifilakisi) ibaluleke ngokukhethekile njengokuqiniswa kwama-resin polymeric, ama-thermoplastic, nama-thermoset.
Ama-fibers bast fibers ayimithombo ebalulekile lapho i-cellulose nanocrystals (CNCs) ingasuswa khona. Ama-nanocrystals e-cellulose abonakala ngendawo yawo ephezulu futhi ukuqina kwawo okungavamile nokuqina okunamandla. Ama-CNC’ Amandla okuqeda amandla angaphezu kwamandla eglasi noma aluminium. Ama-nanocrystals e-cellulose ayinto eshibhile futhi ngaleyo ndlela anesincintisana nano-additi, uma kuziwa emanani, ukutholakala, ubuthi kanye nokusimama.
I-Sonication iyindlela elula yokusebenzisa, okusheshayo futhi eluhlaza, evumela ukukhiqiza ama-nanocrystals aphezulu kakhulu e-cellulose.
Sosiati et al. 2014 kubonisa imiphumela ezuzisayo ye-sonication kwi-fibre processing.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonicators ye-Fiber Processing
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza imishini ephezulu yokusebenza ye-ultrasonic yezinhlelo zokusebenza ezisindayo. Izinhlelo zethu ze-ultrasonic zingasetshenziselwa i-batch noma ukuqhutshwa okuqhubekayo kwe-inline. Zonke izinqubo ze-ultrasonic zezimboni ze-Hielscher zingaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Noma kunjalo, ikhono lama-amplitudes aphezulu kakhulu akwanele ukuqhuba inqubo ephumelelayo ye-fiber ultrasonic, njenge-retting noma i-fibrillation. Kuye ngento eluhlaza kanye nomphumela ohlosiwe, imingcele yenqubo – okungukuthi, amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa, kanye nesikhathi – kumele kube yilapho ekwazi ukulawula futhi eguquguqukayo.
Amaphrosesa ase-Hielscher digital ultrasonic aqoshiwe ngokuzenzakalelayo yonke inqubo yokucubungula idatha ekhadini le-SD edidiyelwe, ngakho-ke imiphumela yenkambiso yenziwa kabusha. Ukuphakama nokucubungula kungashintshwa ngokuqondile futhi kugunywe kusuka ezimweni ezincane kakhulu kuze kube yilapho kunesimo esibucayi kakhulu sonication. Lokhu kukunika ithuba lokucubungula izinto ezihlukahlukene ukuze uthole ukukhishwa okuhle.
U-Diana P.Ferreira, uJuliana Cruz, uRaul Fangueiro (2019): Isahluko 1 – Ukuguqulwa kwendawo yezintambo zemvelo kumakhemikhali e-polymer. Ama-Composite ahlaza okwenza izithuthi ze-Automotive. Uchungechunge lwe-Woodhead Publishing ku-Composites Science and Engineering 2019, amakhasi 3-41.
USullivan Renouard, uChristophe Hano, uJoel Doussot, uJean-Philippe Blondeau, u-Eric Lainé (2014): Ukukhishwa kwe-ultrasonic ithonya kwi-coir, i-flax kanye ne-hemp fibers. Izincwadi Zezincwadi 129, 2014. 137-141.
H. Sosiati, M. Muhaimin, uP. Abdilah, DA Wijayanti, Harsojo, K. Triyana (2014): Umphumela wezokwelapha ngamakhemikhali
izici ze-cellulose yemvelo. I-AIP Conference Proceedings 1617, 105 (2014).
UMnuz Zimniewska, R. Kozłowski, J. Batog (2008): I-Nanolignin Modified Linen Fabric njengoMkhiqizo Wokusebenza. Amakhemikhali Amangqamuzana Namakhaza Amanzi Vol. 484, Issue 1, 2008.
Ukulima kuyisitshalo esiningi esetshenziselwa imbewu ye-hemp futhi kamuva amafutha embewu, i-terpenoids kanye ne-cannabinoids (i-CBD, i-CBG, njll.) Kanye nomquba we-hemp, ongasetshenziselwa izinto eziwusizo. Ngokuphathelene nekhwalithi ye-hemp fibre, ihlukaniswe phakathi kwezinto ezibizwa ngokuthi ama-tow fibers, ezingahambisani naso, izintambo ezincane zefiber kanye nemigqa ebizwa ngokuthi umugqa, okuyimigqa ende (ehambisana ne-longitudinal).
Ama-bundel amafayili amancane abuye abizwe ngokuthi ama-fiber ezobuchwepheshe futhi asetshenziselwa ikakhulukazi embonini yezimoto, ukukhiqizwa kwephepha nokuhlanganiswa kwe-bio-based. Amafayili ama-long hemp asetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ze-textile nezindleko eziphezulu ezifana nezinhlanganisela eziphezulu zokusebenza kanye nama-bio-composites.
Ukukhiqiza ukukhiqizwa kwefayibha:
I-hemp hemp (i-hemp eklanyelwe umkhiqizo we-fiber) ivunwa kahle ngaphambi kokuqhakaza. Lokhu kuqala ukutshala kuphumela kukhwalithi ephezulu yefayibha ngoba ikhwalithi iyancipha uma ukuqhakaza kuvunyelwe. Ngokuvamile, i-fiber hemp ivunwa ngemuva kwezinsuku ezingama-70-90 ngemuva kokutshala imbewu. Ukuze uvune i-hemp, izitshalo zisikwa zibe ngu-2-3cm ngaphezu kwenhlabathi bese zomiswa izinsuku ezimbalwa. Ngemuva kokuvuna, i-hemp iyabuyiselwa. Ukubuyela emuva kuyinqubo esebenzisa umswakama namagciwane ukudiliza ama-pectins esitshalo, ahlangana ngamakhemikhali isiqu se-hemp ndawonye. Ngokwesiko, ukhipha izinguzunga ze-hemp kwakuzodonswa amanzi noma kube ngamazolo ngaphambi kokuba imicu ihlungwe. Inqubo yokubuyisa isiza ukwahlukanisa okwalandelayo kwe-bast kulokho okubizwa ngokuthi yi-hemp hurd noma i-shiv (okuwumgogodla onesihlahla se-hemp stems). Ngemuva kokuphinda uqhubeke, umhlanga we-hemp womile (kokuqukethwe komswakama okungaphansi kuka-15% futhi kufakwe ibheyili.
Ukuze uthole izintambo ze-hemp, ezingasetshenziselwa ukukhiqiza futhi njengezithasiselo, amafayili kumele ahlukaniswe ngenqubo eyaziwa ngokuthi “ukushaya”. Phakathi nenqubo yokumangalisa insimu ye-hemp iqhutshwa ngokucophelela ukuze igwebe isitshalo se-hemp, isb. Kule nqubo yokwenziwa komshini i-hemp ishaywa ngokumelene neskrini kuze kube yilapho isiqhwa, ama-fibers amancane, futhi uthuli luwela esikrinini. Imishini yokuhlobisa i-high-speed kinematic yesimanje ikwazi ukuhlukanisa i-hemp ibe yimifudlana emithathu; i-fibre bast, i-hurd, ne-microfiber eluhlaza.
Okuqukethwe kwe-cellulose ku-hemp ku-approx. 70-77%. Imicu ye-hemp ingumumo omuhle kakhulu wezinkuni ze-cellulose
Izinzuzo ze-Hemp Fibers
amandla okuqina okunamandla nokuqina
okufanelekile ngemikhiqizo engekho emhlanjeni engekho
ukushintshwa okuphumelelayo kwe-glass fiber
kunciphisa isikhathi sokubunjwa
ukunciphisa kwesisindo esigxotsheni esiphelile
kulula ukucubungula nokuvuselela kabusha
kungenziwa ngezifiso ukuhlangabezana nezincazelo ezihlukahlukene nezinhlelo zokukhiqiza ezahlukene
ikhwalithi eqhubekayo nokutholakala kokunikezwa kungenzeka
Izinto ezibonakalayo ezinembile
Lapho amafayili omshini ekhishwa ngotshani we-flax, izingxenye ezingekho ze-fibre ze-stem, ezingabandakanyi imbewu, zivame ukubhekwa ngokuthi yi-shives noma izihluthulelo. Isibonelo kufeksi e-oil, i-shives ihlanganisa u-approx. 70 – I-85% yenani eliphelele lensimbi, okwenza ama-shives abe yi-main-product yomkhiqizo we-flax processing processing.
Ukukhiqizwa nge-ultrasonically, i-lignin engakhiwe isetshenziselwa ukwenza amakhwalithi edayini e-multifunctional. Nge-padding linen textiles nge-nano-lignin, izindwangu eziningi ezingasebenza zingadalwa. Lezo zindwangu eziningi ezihlinzekwayo zinikeza izakhiwo ezengeziwe ze-UV barrier, i-antibacterial, ne-antistatic.